Masar: 29 qofood oo loo xiray in ay Turkiya u basaasayeen – Kasmo Newspaper
Masar: 29 qofood oo loo xiray in ay Turkiya u basaasayeen
Updated - November 25, 2017 8:59 pm GMT
London (Kasmo), Mas’uuliinta Masar ayaa toddobaadkaan gudihiisa xabsiga dhigay 29 qof oo lagu eedeeyay in ay u basaasayeen Turkiya iyo in ay ka tirsanyihiin Ururka Akhwaanul Muslimiin.
Qabashada dadkaan ayaa dhacday maalintii Arbacada, 22 Nofember, kadib baaritaanno ay sameeyeen Sirdoonka Masar, oo lagu sheegay in shakhsiyaadka la xiray u gudbinayeen Sirdoonka Turkiya macluumaad qayb ka aah qorshe la doonayo in xukunka lagu soo celiyo Akhawaanul Muslimiin.
Xiriirka Ankara iyo Qaahira ayaa ahaa mid aan xasilloonayn tan iyo markii 3dii July 2013, afgambi lagu riday Xukuumaddii uu hoggaaminayay Maxammed Mursi.
Mursi waxaa lagu doortay, sannadkii 2012kii, doorashooyinkii u horreeyay oo dimuqraadi ah oo ka dhaca Masar, kacdoonkii dadweyne ee “Xagaagii Carabta” ka dib.
Tan iyo intii Madaxweynaha talada haya, Cabdelfataax Al-Sisi, afgambiga ku qabsaday xukunka ka dib, Ururka Akhwaanul Muslimiin waxaa lagu shaabadeeyay “argagixiso”, hawlahoodiina waxaa laga dhigay sharci darro, inta badanna xubnahoodii xabsiga ayaa la dhiagay.
In kasta oo Madaxweyne Al-Sisi, bishii hore caddeeyay in Masar ayan ka jirin maxaabiis siyasadeed, Hay’adaha xuquuqda u dooda ayaa ku qiyaasaya 60,000, dadka arrimaha siyaasadda u xirxiran wakhtigaan..
Ururka Akhwaanul Muslimiin wuxuu si qoto dheer ugu xiranyahay Xisbiga caddaaladda iyo Horumarka ee Madaxweyne Erdogan, AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi), sidaa darteedna xubno badan oo Ururkaas ka tirsan ayaa magangalyo siyaasadeed ku jooga Turkiya.